Video « Format « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
आकर्षक पर्यटकीय संरचनाले भरिभराउ कैलालीको टीकापुर क्षेत्र थप पर्यटकको पर्खाईमा
भजनी, ११ फागुन- आकर्षक पर्यटकीय संरचनाले भरिभराउ कैलालीको टीकापुर क्षेत्र थप पर्यटकको पर्खाईमा छ । प्रदेश नं ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सिमाना कर्णाली पुल हुँदै
पशुपति क्षेत्रमा सजावटमा राखिएको फूलमाला चोरिँदै, फोहर थुप्रिँदै
काठमाडौँ, ११ फागुन -महाशिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्रको सजावटमा राखिएको फूलमाला चोरी हुन थालेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पहलमा भक्तजनकै सहयोगमा यस वर्ष करिब रु
आफ्नो ६९ औँ जन्मोत्सव मनाउन प्रधानमन्त्री ओली
बस एकापसमा ठक्कर खाँदा दुवै बसमा सवार
सवारी साधन र धुलोसँगै बित्छ ट्राफिक प्रहरीको
शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन सुरक्षाको नयाँ रणनीति
गैरआवासीय नेपालीले गरेको व्यवसाय र लगानीमा पूर्ण
देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ – अध्यक्ष
प्रेम दिवसमा निराजन र सृष्टीको रोमान्स !
पारपाचुके पछि आयो रामकृष्ण ढकाल दम्पतीको रोमान्टिक म्युजिक भिडियो
मासिक राशिफलः मेष राशि हुनेको यस्तो रहन्छ माघ महिना
ज्योतिष भनेको सौर्यमण्डलमा रहेका ताराहरू र ग्रहहरूको आपसी सम्बन्धबाट प्राप्तहुने किरण अथवा तरंगलाई सुक्ष्म गणितीय सूत्रबाट अध्ययन गरेर त्यसको यस पृथ्वीमा विद्यमान जड र चेतन माथि पर्ने प्रभावको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने अद्वितीय विज्ञान हो। वेदको प्राकट्य संगै अपौरूषेय रूपमा स्थापित ज्योतिष शास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्व विदितै छ।
वेदमा सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान निहित रहेको कुरा कतिपय पश्चिमा विद्वानहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्। त्यो ज्ञान र विज्ञानलाई अध्ययन गर्नको लागि ज्योतिषरूपी चक्षुको आवश्यकता छ। वैज्ञानिकहरूले आज कम्प्युटर दूर्बिन र अनेक विश्वविद्यालयको ल्याब वा प्रयोग शालामा वर्षौ बसेर पूरा ब्रह्माण्ड कै अध्ययन गर्दै आएकाछन्।
करोडौं खर्च गरेर पोखरामा यस्तो बनाइदैछ रंगशाला
आसन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अघि सक्नुपर्ने पोखरा रंगशाला फुटबल मैदान निर्माणमा ढिलाइ
आसन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अघि सक्नुपर्ने पोखरा रंगशाला फुटबल मैदान निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। भारतबाट ल्याउने प्रक्रिया लम्बिँदा दुबो बाटैमा सुकेकाले त्यही ल्याएर मैदानमा बिछ्याइँदा अहिले आधाभन्दा बढी फेर्नुपर्ने देखिएको छ।
पोखरा रंगशालामा सागअन्तर्गत महिला फुटबल हुँदै छ। साग सुरु हुन २० दिन बाँकी रहँदा मैदानमा बिछ्याइएको दुबो बिग्रिएर फेर्नुपर्ने भएपछि महिला फुटबल हुने/नहुने अन्योल उत्पन्न भएको छ।
भारतको कोलकोलाबाट झिकाइएको माटोसहित बर्मुडा दुबोको चपरी भारतीय क्वारेन्टाइनले भन्सारमा रोक्दा पोखरा ल्याउन ८ दिन लागेको थियो। तिनै दुबो पोखरा रंगशालामा बिछ्याइयो। फुटबल मैदानको ८७ हजार वर्गफिट क्षेत्रमा दुबोको चपरी बिछ्याइएको थियो। तर आधाभन्दा बढी दुबो उम्रिएन।
नउम्रिएको दुबो झिकेर निर्माण कम्पनीले थप ६३ हजार वर्गफिट दुबो बिछ्याइसकेको छ। थप १२ हजार वर्गफिट दुबो मगाइएको छ।
दोबाटेकी थसुल्ली र उनकी सम्दिनीसंग रोमान्सदेखि बच्चा जन्माउनेसम्मका कुरा (भिडियो हेर्नुहोस)
हास्य टेलिशृन्खला दोबाटेकि मुख्य कलाकार लक्ष्यणा राई अर्थात थसुल्लीकि सम्धिनी पहिलोपटक मिडियामा आएकी छिन ।
हास्य टेलिशृन्खला दोबाटेकि मुख्य कलाकार लक्ष्यणा राई अर्थात थसुल्लीकि सम्धिनी पहिलोपटक मिडियामा आएकी छिन । मिस लिम्बुमा फस्ट रनरनप सबनम साम्बा लिम्बू पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा पनि ब्यस्त छिन । थसुल्ली भने सबैको प्रीय कलाकार बनेकी छिन । उनको अभिनय सबैले मन पराउदै छन ।
थसुल्ली र सबनमले अब चाडै बिहे गरेर बच्चा जन्माएर सम्दिनी बन्ने कुरा यसरी गरे कि सबै हासेर बेहोस नै झन्डै बने । बिहे नै नभएका दुई ले अब कसरी बच्चा जन्माउने र सम्दिनी हुने होलान ? उनिहरुले गरे अचम्मकै कुरा हेर्नुहोस त तल भिडियोमा छक्क पर्नुहुनेछ।
दोबाटेले निशा भगाएपछि थसुल्ली काठमाडौ पुगेर यस्तोसम्म गरिन [भिडियो हेर्नुहोस]
देशमा रबि लामिछानेको कुराले माहोल तातिएर सबैजना निराश भइरहेको अवस्थामा एकैछिन लागेको चोटमा थोरै भएपनी
देशमा रबि लामिछानेको कुराले माहोल तातिएर सबैजना निराश भइरहेको अवस्थामा एकैछिन लागेको चोटमा थोरै भएपनी मलम लगाउन अनि एकैछिन हसाउन हास्य टेलिशृन्खला दोबाटे आइसकेको छ । हरेन्द्र खत्रीको लेखन निर्देशनमा तयार हुने दोबाटेले हरेक हप्ता मनोरञ्जनका साथमा समाजलाई सधैं सन्देश दिदै आइरहेको छ । हास्य टेलिशृन्खला दोबाटेमा आफ्नै मौलिक कथा अनि गाउले परिवेश र जिबनलाई जस्ताको तेस्तै उतार्ने क्षमता भएका निर्देशक हरेन्द्र खत्रीले समाजलाई सन्देश दिने अनि समाजले पचाउन सक्ने बिसयलाइ पनि सरल तरिकाले प्रस्तुत गर्ने गर्छन । लाखौंको मनमा बस्न सफल दोबाटेले सकारात्मक संदेश दिदै आएको छ । काठमाडौ भन्दा बाहिरबाट बनिने पहिलो सफल सिरियल बनेर नेपालमै पहिलो ईतिहास पनि बनाएको छ । धेरैजसो पुर्बकै कलाकारले भरिएको दोबाटेमा सबै कलाकारहरुको उत्पादन निर्देशक हरेन्द्र खत्रीले नै गरेका छन ।
समाजसेवी कलाकार तथा सञ्चारकर्मी समीर सुबेदी चिबे बुढोको भुमिकामा र आइन्द्र लिम्बु कोपा बुढोको भुमिकामा देखा पर्न थालेपछी अझै रोचक बनेको दोबाटेमा निर्देशक हरेन्द्र खत्री, लक्षणा राई, समीर सुबेदी, आइन्द्र लिम्बू, प्रदीप आचार्य, लक्ष्मी खनाल, सरोज तिमल्सिना, मनोज न्यौपाने, कल्पना कुलुङ, पुर्णकला राई, बिष्णु भट्टराई, निशा घिमिरे, आदि कलाकारहरुको अभिनय देख्न सकिन्छ । यो हप्ताको दोबाटेमा दोबाटेले निशालाई भगाएर काठमाडौ पुर्याएपछी थसुल्ली काठमाडौ नै पुगेर यस्तोसम्म गरिन तल भिडियोमा हेर्नुहोला सारै नै रोचक ढङ्गले देखाइएको छ ।
रबि लामिछानेका हजारौं समर्थक सडकमा उत्रिएपछि प्रहरीले गोलि चलायो (हेर्नुहोस Live भिडियो)
पत्रकार रबि लामिछाने कार्यलयबाट पक्राउ परेपछी हजारौं समर्थक सडकमा उत्रिएका छन । सुपर अन्लाईन टि
पत्रकार रबि लामिछाने कार्यलयबाट पक्राउ परेपछी हजारौं समर्थक सडकमा उत्रिएका छन । सुपर अन्लाईन टि भि टिम चितवन पुगेको छ । चितवनमा रबिलाइ माया गर्ने सबै आइपुगेर आन्दोलन गर्दै रबि लामिछानेलाई एकपटक बाहिर मात्र निकालेर देखा भित्र भित्रै नथुन भनेर समर्थकले भनेपछी प्रहरीले सुनेन । अझै लाठीचार्ज गर्न थालेको छ ।
हजारौं समर्थकहरुले ढुङ्गामुडा गरेपछी स्थिति अझै तनाबग्रस्त बनेको छ । भिडमा सबै रुदै रबि दाइ निर्दोष हो ।समर्थकले झन झन रबि दाइलाइ फसाउन पाइदैन भन्दै नारा लगाएपछि दोहोरो भिडन्त भएपछी प्रहरीले भिड थाम्न नसकेर असुल ग्यास र गोलि चलाएको छ तल भिडियोमा Live हेर्नुहोस होस उड्नेछ ।
सबैले भगवान मानेका रबि लामिछने प्रहरीको नियन्त्रणमा परेपछी देशमा चारैतिर कोलाहल मच्चिरहेको छ । धेरै
सबैले भगवान मानेका रबि लामिछने प्रहरीको नियन्त्रणमा परेपछी देशमा चारैतिर कोलाहल मच्चिरहेको छ । धेरै जना सडकमा उत्रिएर बिरोध गर्ने तयारिमा छन । देश रोइरहेको र सबै जनताको मन रोइरहेको हुदा एकैछिन त्यो पीडा भुलाउन यहाँ हास्य टेलिशृन्खला दोबाटे हेर्नुस त मन हल्का हुनेछ । हरेन्द्र खत्रीको लेखन निर्देशनमा तयार हुने दोबाटेले हरेक हप्ता मनोरञ्जनका साथमा समाजलाई सधैं सन्देश दिदै आएको छ ।
हास्य टेलिशृन्खला दोबाटे छुट्टै आफ्नै मौलिक कथा अनि गाउले जिबनलाई जस्ताको तेस्तै उतार्ने क्षमता भएका निर्देशक हरेन्द्र खत्रीले समाजलाई सन्देश दिने अनि समाजले पचाउन सक्ने बिसयलाइ पनि सरल तरिकाले प्रस्तुत गर्ने गर्छन । लाखौंको मनमा बस्न सफल दोबाटेले गौरवमय दुई सय एकतिस भागसम्म पुर्याएर काठमाडौ भन्दा बाहिरबाट बनिने पहिलो सफल सिरियल बनेर नेपालमै पहिलो ईतिहास बनाएको छ ।
समाजसेवी कलाकार तथा सञ्चारकर्मी समीर सुबेदीले चिबे बुढोको भुमिकामा र आइन्द्र लिम्बुले कोपा बाजेको भुमिकामा देखा पर्न थालेपछी अझै रोचक बनेको दोबाटेमा निर्देशक हरेन्द्र खत्री, लक्षणा राई, समीर सुबेदी, आइन्द्र लिम्बू,प्रदीप आचार्य,लक्ष्मी खनाल, सरोज तिमल्सिना,मनोज न्यौपाने, कल्पना कुलुङ, पुर्णकला राई,बिष्णु भट्टराई, निशा घिमिरे, आदि कलाकारहरुको अभिनय देख्न सकिन्छ । यो हप्ताको दोबाटेमा गाइजात्राको माध्यमबाट व्यंग्य अनि बिकृती र बिसङती विरुद्ध सारै नै रोचक ढङ्गले देखाइएको छ । हास्य टेलिशृन्खला दोबाटेको नयाँ भाग तल भिडियोमा हेर्नुहोला…
इटहरी काण्ड: अन्तत संगै हुने बालिकाले गरिन डरलाग्दो खुलासा, अघिल्लो दिन यस्तोसम्म भएको रहेछ ! (भिडियो सहित)
इटहरीमा भाडामा बस्दै आएकी एक महिलाले भर्खरै गरिन भिडियोमा बोल्दाबोल्दै लाइभ श्रीमानकै अगाडी गरिन आत्महत्या
इटहरीमा भाडामा बस्दै आएकी एक महिलाले भर्खरै गरिन भिडियोमा बोल्दाबोल्दै लाइभ श्रीमानकै अगाडी गरिन आत्महत्या । लामो समयदेखि संका र झगडापर्दै आएको सधै बस्ने बालिकाले देख्ने गरेको बताइन । फेसबुकमा बसेको माया र प्रेम धेरैदिन टिक्न सकेन । अन्त्यमा आत्महत्याको बाटो नै रोज्नुपर्यो श्रीमानकै अगाडि भिडियोमा आत्महत्या गरेपछि आत्तिदै बिदेशमा हुने श्रीमानले भाइलाई त्यहाँ पठाउदा उनले सन्सार छोडिसकिछिन ।
सधै बिदेशमा हुने श्रीमानले पैसा पठाउने गरेको र असाध्यै माया गर्दै आएको बताए । ती महिलाको नागरिकता नभएको बताएपछी सधै देवरका नामबाट पैसा पनि पठाउदै रहेछन । साथै माइती भक्तपुर रहेको पनि भन्दै आएकी रहिछिन छिमेकिहरुलाइ ।अचम्मको कुरा त के छ भने बर्षा खड्का नाम बताउने महिलाले बिदेशमा रहेका युवासंग फेसबुकबाटै बिबाह गरेका रहेछन ती महिलाले पहिले आफुले बिबाह नगरेको बताएको र अब बिदेशबाट आएपछी बिबाह गर्ने भनेर बसेका उनिहरु बिच एकाएक झगडा हुन थाल्यो ।
बिदेशमा हुने श्रीमानले महिलाको पहिले अरु कसैसङ बिबाह भएको र नौ बर्षको छोरो पनि भएको थाहा पाएपछी सम्बन्ध बिग्रीदै आएपछी इमोमा भिडियो कलमा बोल्दाबोल्दै आबेशमा आएर ती महिलाले श्रीमानकै अगाडि झुन्डिएर मरेपछी हतारहतार श्रीमानले उनका भाइलाई फोन गरेर पठाएका रहेछन । छेउको कोठामा बस्ने अनि सधै सङै हुने सबैभन्दा नजिकैबाट चिन्ने बैनीले खोलिन सम्पुर्ण रहस्य र नालिबेली तल भिडियोम हेर्नुहोला…
भाग्य न्यौपानेको घर पुग्दा बुबा भक्कानिएर गरे मुटु छुने यस्ता कुरा (भिडियो हेर्नुहोस)
गरिब र दुखीका भगवान बनेका भाग्य न्यौपानेको घर पुग्दा उनका बुबा कुरा गर्दा गर्दै भावुक
गरिब र दुखीका भगवान बनेका भाग्य न्यौपानेको घर पुग्दा उनका बुबा कुरा गर्दा गर्दै भावुक बनेर गरे सबैको मन छुने कुरा । बुबाले भाग्यको बालापन देखि अहिले सम्मको सबै कुरा सुनाए । सानैदेखी बच्चादेखि बुढाबुढी सम्म सबैसँग मिल्ने भाग्य सारै नै बाठा थिए बुबा भन्छन सानामा भाग्यलाई गाउमा दुई चार जनाले पछि चोर हुन्छ भनेका रहेछन । अहिले भाग्यले कसैको दुख देख्न सक्दैनन सबैलाई सहयोग गरेर सबैका मुटुका ढड्कन बनेका भाग्यलाइ भगवानको अर्को रुप भनेर चिन्छन ।
हजारौंको दुखलाइ बुझ्ने भाग्यले अब बुबाको बुहारी हेर्ने चाहाना पूरा गरिदिए हुन्थ्यो भन्छन बुबा । अब भाग्यको मङ्सिरमा बिबाहको तयारी हुँदै गरेको र छोराले आफ्नो बोली नकाट्ने बताउछन बुबा । घरमा सबै छोराछोरी बुबासङ डराउने र सम्मान गर्ने बताउछन । पछिल्लो समय भाग्य न्यौपाने सामाजिक संजालमा छाएका छन । दुख र पिडामा परेका सबैका लागि सहयोग गर्ने भाग्य जस्तोसुकै दुख र पीडा आफुले सहेर भए पनि नेपालका सबै ठाउमा पुग्छन । बाढी पहिरो र अफ्ट्यारो बाटो हुदा पनि जस्तोसुकै ठाउमा पुग्ने भाग्यलाई सबैले भगवान मान्छन ।
दुई हजार उन्पचास सालमा जन्मिएका भाग्य छोटो समयमा सफल ब्यक्ति हुन । बाल्यकाल देखि नै दयालु भाग्य बच्चा देखि बुढाबुढी सबैलाई माया गर्ने बताउछन बुबा । बुबाले सुनाए सारै गरिब परिवार छोराछोरिलाई पढाउन बढाउनलाई गारो भएपछी करिब तीन बर्ष कतारको घाममा पसिना बगाएका बुबा भाग्यले गरेको काम देखेर गर्भ लाग्छ भन्छन । भाग्यका बुबाले पुराना दुख सम्झेर भावुक हुँदै यस्तोसम्म सुनाए तल भिडियोमा हेर्नुहोला…
झापामा भेटिए पानीजहाज, हेलिकप्टर, रोबर्ट र बम बनाउने १५ बर्षका भाइ, नेपाली बैज्ञानिक सन्सार हल्लाउँदै (भिडियो हेर्नुहोस)
झापा । झापामा भेटिएका बाल बैज्ञानिक अचम्मका छन । उनले कतै केही नहेरी आफैले आबिस्कार
झापा । झापामा भेटिएका बाल बैज्ञानिक अचम्मका छन । उनले कतै केही नहेरी आफैले आबिस्कार गरेर सन्सार चकित बनाएका छन । सानैमा यतिधेरै ट्यालेन्ट भाइ सल्यानका हुन । अहिले झापा बस्दै आएका उनीले हेलिकप्टर बनाएर सल्यानमै सबैलाई चकित बनाएका थिए । गरिब परिवारमा जन्मिएका बिजय सानैदेखी रेडियो घडी फुटाउदै फेरि जोड्दै गरेर बनाउदै हिड्ने गर्थे । सानैबाट बिज्ञानमा इन्ट्रेस्ट राख्ने बिजयको सपना नेपालमै बसेर धेरै कुरा आबिस्कार गरेर सन्सारमाझ नेपाललाई चिनाउन चाहन्छन । बिजयले हेलिकप्टर पानीजहाज रकेट रोबर्ट हाबाबाट बिजुली साथै बम पनि बनाउदै छन ।
पानीजहाज चाहिँ अब पुर्ण रुपमा तयार भएको र अब चाडै नै चार जनालाई राखेर कुदाउन तयारी भैरहेको बताउछन बिजय । यतिमात्रै कहाँ हो र उनले आफ्नै छुट्टै कोडिङ भासा पनि तयार पारेका रहेछन । आफुले बनाएका समानहरुमा के के प्रयोग गरिएको छ र कसरी बनाइन्छ भनेर हरेक बैज्ञानिकले आफ्नै कोडिङ भाषा बनाउछन । त्यस्तै आफ्नै भासा बनाएका छन यी १५ बर्से भाइले जसमा आफ्नै ब्याकरण आफ्नै किसिमका क ख लगायत नेपाली भासामा भएजस्तै सम्पुर्ण कुराहरु उनको भासामा छन ।
उनले आफ्नो भासाको बारेमा सबै जानकारी पनि दिए । नेपालमा जन्मिएर त्यसमाथि पनि पहाडको बिकट गाउमा जन्मिएको कलिलो तर यति राम्रो कला भएको बलकलाइ नेपाल सरकारले घ्यानमा राखेर केही गर्ने अवसर दिइएको खण्डमा नेपालको आर्थिक बिकास साथै बिस्वमाझ नेपाल पनि सफल देशको नामले चिनिने थियो । सानै उमेरमा बनाएका हेलिकप्टर रोबर्ट पानीजहाज रकेट बम जस्ता धेरै कुराहरु कस्ता छन अनि के भन्छन त उनी तलको भिडियोमा हेर्नुहोला तपाइँ अचम्ममा पर्नुहुनेछ ।
भाग्य न्यौपानेको घर पुग्दा बुबाले खोले भाग्यको बालापन देखी अहिलेसम्मको सम्पुर्ण नालिबेली (भिडियो सहित)
गरिब दुखीका भगवान भाग्य न्यौपानेको घर पुग्दा उनका बुबाले पहिलोपटक मिडियामा भाग्यको बालापन देखि अहिले
गरिब दुखीका भगवान भाग्य न्यौपानेको घर पुग्दा उनका बुबाले पहिलोपटक मिडियामा भाग्यको बालापन देखि अहिले सम्मको सम्पुर्ण नालिबेली बताए । भान्य न्यौपानेका बुबाले अब भाग्यको मङ्सिरमा बिबाहको तयारी हुँदै गरेको बताए । पछिल्लो समय भाग्य न्यौपाने सामाजिक संजालमा छाएका छन । सबैको दुखमा मलम लगाउने भाग्य दुख देख्नै सक्दैनन । दुख देख्न नसक्ने भाग्य न्यौपाने सबैको दुख आफ्नै सम्झिन्छन । दुख र पिडामा सबैको लागि सहयोग गर्ने भाग्य जस्तोसुकै दुख र पीडा सहेर भए पनि नेपालका सबै ठाउमा पुग्छन ।
बाढी पहिरो बाटो उस्तै हुदा पनि जस्तोसुकै ठाउमा पुग्ने भाग्यलाई सबैले भगवान नै मान्छन । २०४९ सालमा जन्मिएका भाग्य सानैदेखी बुबा आमाको सेवा गर्ने खालका थिए । भाग्य न्यौपानेलाई अब बुहारी खोज्दै गरेको बताए उनकी हुनेवाली यस्ती हुनुपर्छ भनेर बुबाले सुनाए । भाग्य न्यौपाने बाल्यकालमा यस्तो रहेछन । बाल्यकाल देखि नै दयालु भाग्य बच्चा देखि बुढाबुढी सम्मसंग मिल्ने र सबैलाई माया गर्ने बताउछन उनका बुबा । भाग्य न्यौपानेको सुरुदेखी अहिलेसम्मको सम्पुर्ण नालिबेली यसरी बताए उनका बुबाले तल भिडियोमा हेर्नुस्…
भद्रगोलको अर्को रुप दोबाटे, भद्रगोललाई माया गर्नेले मात्र हेर्नुहोला (भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौं । हरेन्द्र खत्रीको लेखन निर्देशनमा तयार हुने दोबाटेले हरेक हप्ता मनोरञ्जनका साथमा समाजलाई सधैं
काठमाडौं । हरेन्द्र खत्रीको लेखन निर्देशनमा तयार हुने दोबाटेले हरेक हप्ता मनोरञ्जनका साथमा समाजलाई सधैं सन्देश दिदै आएको छ । छुट्टै आफ्नै मौलिक कथा अनि गाउले जिबनलाई जस्ताको तस्तै उतार्न सक्ने क्षमता भएका निर्देशक खत्रीले समाजलाई सन्देश दिने अनि समाजले पचाउन सक्ने र जस्तोसुकै बिसयलाइ पनि सरल तरिकाले प्रस्तुत गर्ने गरेका छन । लाखौंको मनमा बस्न सफल दोबाटेले गौरवमय दुई सय उनन्तिस भाग पुर्याएर काठमाडौ भन्दा बाहिरबाट बनिने पहिलो सफल सिरियल बनेर नेपालमै पहिलो ईतिहास पनि रचेको छ ।
कलाकार तथा सञ्चारकर्मी समीर सुबेदीले चिबे बुढोको भुमिकामा र आइन्द्र लिम्बुले कोपा बाजेको भुमिकामा देखा पर्न थालेपछी अझै रोचक बनेको दोबाटेमा निर्देशक हरेन्द्र खत्री, लक्षणा राई, समीर सुबेदी, आइन्द्र लिम्बू, प्रदीप आचार्य, लक्ष्मी खनाल, सरोज तिमल्सिना, मनोज न्यौपाने, कल्पना कुलुङ, पुर्णकला राई, बिष्णु भट्टराई, निशा घिमिरे, आदि कलाकारहरुको अभिनय देख्न सकिन्छ । यो हप्ताको दोबाटेमा अहिलेको तिजमा हुने बिकृती र बिसङती विरुद्ध सारै नै रोचक ढङ्गले देखाइएको छ । हास्य टेलिशृन्खला दोबाटेको नयाँ भाग तल भिडियोमा हेर्नुस्…
मोरङ काण्ड: सासुलाई महिलाहरुले घेरेपछि बल्ल खोलिन मृत्युको रहस्य (भिडियो हेर्नुहोस)
मोरङको उर्लाबारी मङलबारेमा मध्यरातमा नै एक महिलाको रहस्यमय मृत्यु भएको छ । राती खाना खाएर
मोरङको उर्लाबारी मङलबारेमा मध्यरातमा नै एक महिलाको रहस्यमय मृत्यु भएको छ । राती खाना खाएर सुतेको परिवार बिहान उठ्दा नसोचेको भएको बताउछन । अहिले गाउँनै तनाबमा छ शोकमा छ । गाउँमा सबैले लोग्नेले मारेको भनेर नारा जुलुस नै लगाए । सन्का गरिएका मृतकका लोग्नेलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याइसकेको छ । घटनास्थल पुग्दा मृतककी सासुलाइ महिलाहरुले घेरेका रहेछन ।
सधै घरमा लोग्ने स्वास्नीको झगडा पर्ने गरेको र घाँटी थिच्ने गरेको पनि गाउलेले बताए । प्रहरिले आएर सम्झाएका पनि थिए । आरोप लगाइएका मृत्यु हुनेका श्रीमानको यो भन्दा पहिला पनि एक जनासङ बिबाह भइसकेको र उनकी जेठी स्वास्नी बिराठनगरमा रहेकी जानकारी गराए गाउलेले ।
घटना घटेकै बिहान एक्कासी घरमा ड्याम्म गरेर आवाज आएपछी सन्का गरिएका श्रीमानले नै रेखा रेखा भनेर बोलाए अनि उनका दाइ श्याम गिरिलाई दाइ रेखा त बोल्दिनन भनेर बोलाएका थिए । सिढी बाट लडेर मृत्यु भयो भनेर भनेपछि गाउका महिलाहरुले लडेर मरेको भन्ने कुरा मानेनन हैन मारेकै हो भनेर नारा जुलुश नै लगाएका थिए । भिड एकदमै धेरै बढेको छ । त्यो रात यस्तो भएको रहेछ सासुले सम्पुर्ण रहस्य र नालिबेली यसरी बताइन् तल भिडियोमा हेर्नुहोला…
मोरङमा फेरि अर्की महिलाको रहस्यमय मृत्यु, जेठानीले खोलिन सम्पुर्ण रहस्य र नालिबेली (भिडियो हेर्नुहोस)
मोरङको उर्लाबारी मङलबारेमा घट्यो फेरि अर्को डरलाग्दो घटना । राती नै एक महिलाको रहस्यमय मृत्यु
मोरङको उर्लाबारी मङलबारेमा घट्यो फेरि अर्को डरलाग्दो घटना । राती नै एक महिलाको रहस्यमय मृत्यु भएको छ । मङलबारे चोक नजिकै घटेको उत्त घटना एक सामान्य परिवारमा घटेको हो । राती खाना खाएर सुतेको परिवार बिहान उठ्दा नसोचेको भएको बताउछन परिवार । अहिले गाउँनै तनाबग्रस्त बनेको छ ।
गाउँमा सबैले लोग्नेले मारेको भनेर नारा जुलुस नै लगाए । सन्का गरिएका मृतकका लोग्नेलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याइसकेको छ । घटनास्थल पुग्दा मृतककी जेठानिले गरिन सबै नालिबेली बताइन । सधै घरमा लोग्ने स्वास्नीको झगडा पर्ने गरेको र प्रहरिले आएर सम्झाएका पनि थिए । यो भन्दा पहिला पनि एक जनासङ बिबाह गरेका थिए र उनकी जेठी स्वास्नी बिराठनगरमा रहेकी छिन ।
घटना घटेकै बिहान एक्कासी घरमा ड्याम्म गरेर आवाज आएपछी सन्का गरिएका श्रीमानले नै रेखा रेखा भनेर बोलाएर दाइ रेखा त बोल्दिनन भनेर उनका दाजुलाइ बोलाएका थिए र सिढी बाट लडेर मृत्यु भयो भनेर भनेपछि गाउका स्थानीय महिलाहरुले लडेर मरेको हैन मारेकै हो भनेर नारा जुलुश नै लगाएका थिए । जेठानिले घटनाका बारेमा सम्पुर्ण रहस्य र नालिबेली यसरी बताइन् तल भिडियोमा हेर्नुहोला
वाईफाईको तारबाट करेन्ट लागेर एकको मृत्यु, मध्यरातमा अस्पताल तनाबग्रस्त (भिडियो सहित)
प्रकाश कार्की नाम गरेका दमक २ ढुकुरपानी निबासी २६ बर्षका आजै देखि काममा लागेका थिए
प्रकाश कार्की नाम गरेका दमक २ ढुकुरपानी निबासी २६ बर्षका आजै देखि काममा लागेका थिए । नयाँ ब्यक्तीलाई कुनै सुरक्षा बिना किन पोल चडाईन्छ ?? बिना ग्लोब्स, बिना सेफ्टी हेल्मेट, कुनै ट्रेड्निङ बिना किन यस्तो संबेदनसिल इलेक्ट्रोनिक सामानहरु चलाउन दिईन्छ ? हिजो एउटा मरे, आस्ती यसै क्षेत्रमा अर्को जना मरे अनि आज यस्तो भयो । केहि दिन अगाडिसम्म एकै ठाँउमा काम गर्दै आईरहेको , एउटै ठाँउमा खान-पिन गर्ने साथी भन्छन ढुकुरपानी, दमक-२, झापामा घर भइ एक सानो छोरा , श्रीमती, दाजुभाइ , दिदिबहिनी, अनि आफ्ना आमा बुबा को साथमा घरकै खाना खाई अब जे गर्नु आफ्नै ठाउँमा गर्छु भन्ने सोचले मलेशियाबाट फर्केर आएका २०५३ साले प्रकाश कार्की साथीको यो हालत भएको छ ।।
विभिन्न राजनीति चलखेल र ठुलाबडा को आफ्नो माथिल्लो पौचले गर्दा ति सस्था पाथिभराका माथिल्लो मानिसलाई ईलाका प्रहरी कार्यलयमा राखिए ता पनि कुनै केहि जानकारी आएको छैन । आजैबाट काम गर्न थालेका दुई जना र सोही कम्पनीका मेनेजर बेलडागि स्थित आफ्नो नेटवोर्क बिस्तार गर्ने क्रममा गएका रहेछ्न तर बिना कुनै सेफ्टी, घर परिवारबाट आज देखि होईन भोलि देखि काममा जा भन्दै गर्दा कम्पनीको गाडी घरमै लिन गए पछि काममा गरेका थिए । प्रकाशका दाजुका अनुसार घरमै गएर जबर्जस्ति लगेका थिए । कुनै पनि वैद्युतका तारहरुमा कनेक्सन नगरी , एक पोल देखि अर्को पोलमा नयाँ तार लाउदै थिए। यो क्रम चलीरहेको थियो ।
पोलमा तार लगाई सके पछि भुईबाट त्यो कालो ईन्टरनेटको फाइबर तार अर्को पिलसम्म तान्नु भनेर मेनेजर, र अर्को नयाँ कामदार भने पछि त्यो पलास्टिकले बेरिएको फाइबरको कालो तारलाई छुदा हातमा करेन्ट लागेर त्यही लडेका थिए। त्यो देखे पछि ती मेनेजर , नया कामदारले सिटी सफारीमा हालेर दमक आम्दा अस्पतालमा ल्याइने बितिकै उस्को ज्यान गयो । मेनेजरले पीडितपक्ष लाई अस्पतालमै नराम्रो बेवहार गरे पछि स्थानीय ब्याक्ती आक्रोशित भए पछि तिनिहरु लाई प्रहरीले सुरक्षा दिएर ठाना लगेको छ । शवलाई पुरानो आम्दा लगेको छ र बिहान ७ बजे सत्य कुरा बोल्छु भन्ने यो कम्पनीले भनेको छ। सहिलाई सहि भनियोस् र गलतलाई गलत भनेर मध्यरातमा पनि आफन्तहरु अस्पतालमा नै यसरी बसेका छन । तल भिडियोमा हेर्नुस्…
नेपालकै कान्छी तेस्रोलिङ्गी भन्छिन मलाई पक्का पुरुष चाहियो, दायाँबायाँले हुदैन (भिडियो हेर्नुहोस)
झापाको दमकमा नेपालकै सबैभन्दा कान्छी तेश्रोलिङ्गी महिला अनमोल राई पछिल्लो क्रममा सबैभन्दा सानो उमेरमा आफू
झापाको दमकमा नेपालकै सबैभन्दा कान्छी तेश्रोलिङ्गी महिला अनमोल राई पछिल्लो क्रममा सबैभन्दा सानो उमेरमा आफू पुरुष भएर पनि बाच्न गाह्रो भएको र आफू तेश्रोलिङ्गी महिला हु भनेर खुलेर आएकी छिन । आफूले पुरुषहरूको हर्कत गर्दा गर्दा निस्सास्सिएको बताउछिन उनी । सानो उमेरमै आफू तेस्रोलिङ्गी भएको थाहा भएको र घर परिवार र समाजको डरले बाहिर खुलेर आउन नसकेको अनि अहिले चाहिँ आफुले सहन नसकेर खुलेर आएको तर परिवारको धेरै सपोर्ट पाएको र आफू अब महिला नै भएर जिउनका लागि लिङ्ग परिबर्तन गर्नलाई तयारी हुँदै गरेको बताउछन ।
घर परिवारले पनि आफुलाइ पुरै केटि नै बनाउन पैसा जम्मा गर्दै गरेको बताउछिन उनी । आफुलाइ पुरै केटि भएर घर गृहस्ति चलाउन अनि बच्चा पनि जन्माउन ठूलो रहर भएको बताइन । उनले भनिन आफू नेपालकै कान्छी तेश्रो लिङ्गी महिला भएकोमा गर्भ लाग्छ । यदि कोहि तेस्रो लिङ्गी हुनुहुन्छ र खुल्न सक्नुभएको छैन भने यसो गर्नुहोस भनेर तरिका पनि बताइन । आफुलाइ बिहे गर्न रहर रहेको अनि कोहि तेश्रो लिङ्गी तथा समलिङ्गी संग नभइ पक्का पुरुष चाहियो भन्दै यौन चाहाना र यौन सम्पर्क सम्बन्धी यस्तो अचम्मको सन्सार चकित बनाउने धारणा बताइन । उनले प्रेम सम्बन्धको बारेमा पनि यसो भनिन तल भिडियोमा हेर्नुस्…
नागपन्चमीकै दिन मन्दिरमा नाग देखिएपछि दर्शन गर्नेको घुईचो [भिडियो सहित]
मोरङ । उर्लाबारी मङलबारेको सिबालय मन्दिरमा जिउदो नाग अर्थात गोमन सर्पलाइ पुजा गर्ने अनि दूध
मोरङ । उर्लाबारी मङलबारेको सिबालय मन्दिरमा जिउदो नाग अर्थात गोमन सर्पलाइ पुजा गर्ने अनि दूध फलफुल चढाउनेको भिड बढेको छ । एकाबिहानै नागपन्चमीका दिन मन्दिरमा सर्प आएपछी सबै छक्क पर्दै पुजा आजा गर्न थालेका छन । नागपन्चमीका दिन नागको पुजा गरेर मनाइने चलन छ । जिउदो नागको पुजा गर्न नपाएपछि नागको चित्रलाई घर घर लगेर टासेर पुजा आजा गरिन्छ ।
नागपन्चमीले अब चाडबाड निम्त्याएको र अब चाड पर्व एक पछि अर्को आउदै गरेको सन्केत गर्ने गरेको बताउछन बिज्ञहरु । नागपन्चमीका दिन ज्वाइँचेला ससुराली गएर नाग टास्ने र भान्जा भान्जी मामाघर गएर नाग टास्ने चलन छ । नागपन्चमी पनि नेपालिहरुको बिशेश चाड मध्ये एकमा पर्छ । नागपन्चमीमा जिउदो नागको पुजा आजा गर्दै गरेका भक्तजनहरु सङ कुराकानी गर्दा उनिहरुले यस्तो सम्म बताए । तल भिडियोमा हेर्नुस्…
भाइरल गायिका रचना रिमाल जसको स्वर यति मिठो छ कि सुनेपछी सबै फ्यान नै हुन्छन
भाइरल गायिका रचना रिमाल जसको स्वर यति मिठो छ कि सुनेपछी सबै फ्यान नै हुन्छन । अचम्मै मीठो स्वर भएकी रचना चटपटे बेचेर गुजारा चलाउथिन । एकाएक युटुबमा उनको कलाले ठाउँ पायो र त्यो ठाउको रचनाले मजाले सदुपयोग गरिन । अहिले धेरै गित रेकर्ड गरिसकिन । गित रेकर्ड सकेर रचना घर आएको मौका छोपेर सुपर अनलाइन टि भि टिम उनको घरसम्म पुग्यो । त्यहा पुग्दा आस्चर्य लाग्ने सानी बालिकाको स्वर गुन्जीयो ।
को हुन घरभित्र गित गाउने भनेर सोध्दा रचनाकै बैनी पो रहिछिन । सानी बहिनीको स्वरले हाम्रो मन छोयो । रचना त आफैमा अब्बल थिइन तर उनकी बहिनी झनै मीठो स्वरकी रहिछन । उनीसङ रमाइलो कुराकानी गरेर फकाएर बल्ल बल्ल क्यामेरा अगाडी ल्यायौ । उनले सारै मिठो गित दिदी रचना सङ मिलेर गाइन अनि रचनाले गित गाउदा उनले यति राम्रो नाचेरै देखाइन तल भिडियोमा हेर्नुस्…
अघोरी बाबालाई जङ्गि बाबाको ब्रुस्लि किक, देखाए २५० वटा किक, भन्छन अघोरी झुटो छ (भिडियो हेर्नुहोस)
मोरङको उर्लाबारीमा अचम्मका जङ्गी बाबा भेटिए । उनले काठमाडौका अघोरी बाबा भन्दा आफू अब्बल भएको
मोरङको उर्लाबारीमा अचम्मका जङ्गी बाबा भेटिए । उनले काठमाडौका अघोरी बाबा भन्दा आफू अब्बल भएको कुरा बोलेर हैन कामले देखाए । उनले दुई सय पचास वटा भन्दा बढी किक र योगा देखाउने कलाले सन्सार चकित बनाउछन । बोल्नमा सारै सिपालु बाबाको नाम जङ्गि बाबा रहेछ । उनी सारै जङ्गि भएकाले उनको नाम पनि जङ्गि रहन पुगेको बताउछन उनी । जस्तोसुकै कुरालाई पनि सरल रुपमा बताउने जङ्गी बाबा बेलाबेलामा आक्रोसित मुद्रामा देखिन्छन ।
भन्छन उनलाई भित्ती केटाहरुले आश्रममा आएर गाजा मागेर हैरान बनाउछन । केही गर्दा पनि नभएपछि मात्र उनी हात उठाउन बाध्य बन्छन । उनले पाँच छ जना एकलै तह लगाउदै आएको कुरा सुनाए । अभिनयमा पनि उत्तिकै अब्बल जङ्गि बाबा भन्छन मलाई सबै कुरा सजिलो लाग्छ । उनले हिन्दी चलचित्र सोलेको कथालाई नेपालीमा राजेश हमाल शिव श्रेष्ठ र सुनिल थापा भएको भए कसरी बोल्ने थिए भनेर यसरी सुनाए । अभिनयमा कसैले नसक्ने जङ्गि बाबालाई देखेपछि सबै छक्क पर्छन । काठमाडौका अघोरी बाबालाई झुटो भन्दै उनले दिए कडा चेतावनी ।
उनले पुतली जस्तै उड्ने कला पनि यसरी देखाए कि सबै चकित परिनेछ । उनले दुई सय पचास वटा भन्दा बढी किक र आसन देखाए । रोचक कुरा त के छ भने उनले उनको पेटको आन्द्रा बटारेर देखाउछन । उनले आन्द्रा बटारेर पेट नै खाली बनाउछन । सन्सारै चकित बनाउछन । उनका अगाडि काठमाडौका अघोरि बाबा नै फिक्का लाग्छ । आखिर को हुन त यति खतरनाक जङ्गी बाबा तल भिडियोमा हेर्नुहोला होस उड्नेछ ।
क्यान्सर पीडित आमा र खुट्टा काटिएको छोरालाई आयो यति धेरै सहयोग (भिडियो सहित)
आमालाई पाठेघरको क्यान्सर,पाठेघर काटेर फाल्नु नै पर्यो । ३ लाख रिन तिर्न ट्याक्टरमा बालुवा ढुङा
आमालाई पाठेघरको क्यान्सर,पाठेघर काटेर फाल्नु नै पर्यो । ३ लाख रिन तिर्न ट्याक्टरमा बालुवा ढुङा र ठुलाठुला रुखहरु पनि बोक्न थाले १५ बर्से बालक । आफैले कुदाएको ट्याक्टर भिरबाट खसेर ट्याक्टरको चक्काले उनलाई नै किच्यो । हड्डी सबै भाचिएर हेर्नै नसकिने अवस्था थियो । रातारात गरेर उनलाई काठमाडौ पुर्याइयो तर उनको खुट्टा नै काट्नुपर्यो । आमाछोराको उपचार खर्च जोढ्दा करिब पैतिस लाख ऋण पुगेछ । बिचरा गरिब परिवारको बिचल्ली नै भयो न त घर रहयो न त जग्गा नै ।
उनिहरुको रुदारुदै दिन अनि रात बित्न थाल्यो । सानो पसल गर्ने एक दिदिले सहयोग गरेर कोठाभाडामा बस्दै आएका आमाछोराको सधै दिन रोएरै बित्छ । दमकमा काम खोज्ने क्रममा उनलाई भाडा माझ्ने काम पनि दिइएन दलित भनेर । अनि आफ्नो थर नै ढाटेर एउटा पसलमा भाडा माझेर कमाएको पैसाले महिनाको कोठाभाडा र खान पनि पुग्दैन त्यति धेरै पैतिस लाख कहाँबाट ल्याएर तिर्नु ? सुपर अनलाइन टिभिका समीर सुबेदिले आमाछोराको मनै रुवाउने कहानी सुनेपछी थाहै नपाइ आखाभरी आँसु भएछ ।
सकेको सहयोग सबैले गरिदिनुहोस तपाईंको सानो सहयोग पनि यो दुखी परिवारलाई ठूलो हुनेछ । तपाईंको एक शियरले धेरै सहयोगि सम्म पुग्छ यो समाचार अनि भिडियो सहयोगीले यो देखेर सहयोग गर्नुभयो भनेपनि तपाईंले सहयोग गरेको बराबर हुनेछ । सहयोग गर्नलाई ९८१४९३०७३६ र ९८२५९०६८६६ मा सम्पर्क गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो सहयोग गरेको विवरण सहितको भिडियो समीर सुबेदीले बनाएर सुपर अनलाइन टि भि मा अपलोड गर्नेछन ।
आयो भद्रगोल बिर्साउने यस्तो हास्य टेलिशृन्खला, हेर्नुस् छक्क पर्नु हुनेछ (भिडियो सहित)
हरेन्द्र खत्रीको लेखन निर्देशनमा तयार हुने दोबाटेले हरेक हप्ता मनोरञ्जनका साथमा समाजलाई सधैं सन्देश दिदै
हरेन्द्र खत्रीको लेखन निर्देशनमा तयार हुने दोबाटेले हरेक हप्ता मनोरञ्जनका साथमा समाजलाई सधैं सन्देश दिदै आएको छ । यसपाली चाहिँ अब आउन लागेको चलचित्र कबड्डी कबड्डि कबड्डीको प्रचार रोचक तरिकाले गरिएको छ । अन्य सिरियलमा जस्तो बनावटी देखिदैन दोबाटेमा, छुट्टै आफ्नै मौलिक कथा अनि गाउले जिबनलाई जस्ताको तस्तै उतार्न सक्ने क्षमता भएका निर्देशक खत्रीले समाजले पचाउन सक्ने अनि जस्तोसुकै बिसयलाइ पनि सरल तरिकाले प्रस्तुत गर्छन ।
लाखौंको मनमा बस्न सफल दोबाटेले गौरवमय दुई सय उनन्तिस भाग पुर्याएर काठमाडौ भन्दा बाहिरबाट पनि काठमाडौलाई टक्कर दिने सिरियल बनेर नेपालमै पहिलो ईतिहास पनि रचेको छ । यसमा निर्देशक हरेन्द्र खत्री, लक्षणा राई, समीर सुबेदी, आइन्द्र लिम्बू,प्रदीप आचार्य,लक्ष्मी खनाल, सरोज तिमल्सिना,मनोज न्यौपाने, कल्पना कुलुङ, पुर्णकला राई,बिष्णु भट्टराई, निशा घिमिरे, आदि कलाकारहरुको अभिनय देख्न सकिन्छ । यो पालिको दोबाटेमा गाउमा स्वस्थ रहन कबड्डी खेल्नुपर्ने कुरालाई कबड्डी खेलाएरै देखाइएको छ ।
अशोक दर्जीको घरलाई हस्तान्तरण भएको भोलीपल्ट पनि हेर्न गाउँनै उर्लियो (हेर्नुहोस भिडियो)
काठमाडौँ- पछिल्लो समयका भाइरल व्वाइ अशोक दर्जी हिजो मात्रै घर हस्तान्तरण भयो । घर हस्तान्तरण
काठमाडौँ- पछिल्लो समयका भाइरल व्वाइ अशोक दर्जी हिजो मात्रै घर हस्तान्तरण भयो । घर हस्तान्तरण गर्दा मनिसहरुको घुइचो लागेको थियो । घर हस्तान्तरण गर्दा हरी वशं आर्चाय, रिसी धमाला लगायतका मनिसहरु उपस्थित रहेका थिए । मानिसहरुको भीड थामिसक्नु थिएन ।
सडकमा दश रुपैयामा गति गाउदै हिडेका अशोकलाई यो ठाउमा पुर्याउन टकंले ठूलो सहयोग गरेका थिए । जुन सहयोग र सपर्मेटले आज अशोक यो ठाँउ सम्म आइपुगेका हुन । त्यस्तै उनले अशोक भगवान भएको बताए । अब अशोकले पढाइमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।भोली पल्ट पनि उनको घरमा जाने आँउने मानिसको बाक्लो भीड लागेको थियो । घर नयाँ सामानले भरिएको थियो । कोठाहरु पनि आर्कषक थिए ।यहिबिच टंकले पनि दर्शकले यति धेरै माया देलान भन्ने नसोचेको बताए । थप हेर्नुहोस भिडियो बाट
रजनिकान्त र अक्षयकुमार अभिनित बहुप्रतिक्षत फिल्म २.० को शुटिगं भिडियो लिक (भिडियो हेर्नुस)
OSNepal, Kathmandu, 22nd Aug: A making video of 2.0 has gone viral on social media which
OSNepal, Kathmandu, 22nd Aug: A making video of 2.0 has gone viral on social media which is the shooting ofasong sequence involving Amy Jackson and Rajinikanth. The video shows the kind of heavy graphics and 3D angles that makes up the film, much to the joy of fans. Watch video to know more!
यसरी सुनाए यम बरालले बिहेमा रातो छाता ओढेको अनुभव,भिडियो सहित
गायक यम बराल नेपाली संगितिक क्षेत्रका लागि कुनै नौलो नाम हैन । उनले दिएका स्वरमा
गायक यम बराल नेपाली संगितिक क्षेत्रका लागि कुनै नौलो नाम हैन । उनले दिएका स्वरमा कैयौ गीत कालजयी बनेर सुनौलो पानामा कुदिएका छन् । गायक बराल संग छाता सँगको नातामा छाता संग जोडीएको कैयौ खुरा खोतालिएको छ ।
उनी छाता ओढ्दाको अनुभबमा आफ्नो बिहेमा ओढेको छाता कहिल्यै भुल्दैनन् । उनी भन्छन् ” मैले बिहेमा रातो रंगको छाता ओढेको थिए । अझ मेरो कारमा कालो रंगको छाता कहिल्यै टुट्दैन ।
Film Review – Ant-Man and the Wasp
This image released by Marvel Studios shows Hannah John-Kamen inascene from “Ant-Man and
This image released by Marvel Studios shows Hannah John-Kamen inascene from “Ant-Man and the Wasp.” (Disney/Marvel Studios via AP) This image released by Marvel Studios shows Hannah John-Kamen inascene from “Ant-Man and the Wasp.” (Disney/Marvel Studios via AP)
श्री स्वस्थानी व्रत कथा अध्यायय-६,बिहान श्री स्वस्थानी माताको दर्शन गर्नुहोस आशिर्वाद मिल्ने छ (भिडियो हेर्नुहोस)
श्री स्वस्थानी व्रत कथा अध्यायय-३(पुरानो र बिश्वासिलो पुस्तक बाट प्रसिद्ध गुरु बाट वाचन)भिडियो हेर्नुहोस
रवि ओडको नचाउने गीतमा नाचिन् नायिका वर्षा राउत (भिडियो सहित )
नेपाल आइडल २ जितेर चर्चामा रहेका रवि ओडको प्रतीक्षित गीत “भयो हतार” म्युजिक भिडियो सहित युट्युबबाट
जब बिराज भट्ट ट्रक दुर्घटनामा परेर मर्नु न बाँच्नु भएका आफ्नो फ्यानलाई भेट्न उनको कोठामै पुगे ! भिडियो भाईरल बन्यो (भिडियो हेर्नुस)
चर्चित नायक बिराज भट्ट सिनेमाको मात्रै हैन, वास्तविक जीवनका पनि नायक हुन् । पछिल्लो समय